F17 Pro - ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခံစားမှုအသစ် | OPPO မြန်မာ
အလွန်ခေတ်မီလှပသည့် ဒီဇိုင်း ပြေပြစ်၊ ညက်ညော၊ လုံးဝန်းခြင်းကို ခံစားသိရှိခြင်း
OPPO ၏ ခေတ်ရှေ့ပြေးသော ဒီဇိုင်းနည်းပညာက OPPO စီးရီးများအတွင်း အပါးလွှာဆုံး ဖြစ်မည့် F စီးရီးကို ယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။ ပေါ့ပါးချောမွတ်သည့် ထောင့်ခုံးအထိအတွေ့က လက်မလွတ်စတမ်း ဆုပ်ကိုင်ထားချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Mini Dual Punch-Holes, မပြောင်းရွေ့သော အကျယ်ဆုံး မျက်နှာပြင်အနေအထား
OPPO ဒီဇိုင်းပညာရှင်များမှ ရှေ့ကင်မရာဘေးပတ်လည် အဖျားစွန်းတစ်ဝိုက်အား မီလီမီတာအဆင့် အသေးစိတ်တွက်ချက်ပေးထားပြီး ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမြင့်မားသည့် FHD+ 2400 x 1080 ပစ်ဇယ် ပေါ်တွင် နေရာဆံ့နိုင်သမျှဆံ့အောင် ပုံဖော်ပေးထားပါသည်။
Mini Punch-Hole အချင်း
ရွှန်းစိုသော အမှုန်ဒီဇိုင်းအရောင် အဆင့်မြင့် အကြမ်းခံလက်ဗွေစနစ်
ရွှန်းစိုသော အမှုန်ဒီဇိုင်းအရောင် ၊ အမဲရောင် အသစ် ၊ နူးညံ့သော အထိအတွေ့၊ စွဲမက်ဖွယ် အဆင်း မြင်ကွင်းအသစ်ဖြစ်စေမည့် အမှုန်ဒီဇိုင်းကို သင်တွေ့ကြုံခံစားကြည်ု့လိုက်ပါ။
6 AI Portrait Cameras, စတူဒီယိုတွင် ရိုက်ကူးသည့်အလား လှပနေမည့် ဓါတ်ပုံနည်းပညာ
OPPO F စီးရီးတွင် ပထမဆုံးပါဝင်လာမည့် ကင်မရာ ၆ လုံးဖြင့် သင့်အလှဓါတ်ပုံများကို အဆင့်မြင့်တင်လိုက်ပါ။ Selfie ရိုက်ခြင်း၊ အလှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အကောင်းဆုံး ဖော်ထုတ်ထားသောကြောင့် ယခင်ထက် ပိုမိုကြွရွသော ဓါတ်ပုံများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မျက်နှာအား မှတ်သားပေးနိုင်သည့် HDR နှင့် အလင်းစူးခြင်းအား လျော့ချပေးနိုင်သည့် နည်းပညာများဖြင့် ည Selfie ဓါတ်ပုံများအား ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အလင်းလျှော့၍ အလှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းကို ဖွင့်ပေးထားရုံဖြင့် ဝေဝါးသော မြို့ပြ၏ အလင်းရောင်များကြား အပြောင်မြောက်ဆုံးသော ညခဓါတ်ပုံများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
သင့်အလှဓါတ်ပုံကို အရောင်အသွေး စုံလင်လှပအောင် ပံ့ပိုးပေးပြီး နောက်ခံ အရောင်များအား မှိန်ပေးကာ စတိုင်ကျကျ ဘောင်ကွပ်ပေးခြင်းဖြင့် တမူထူးခြားသော အလှဓါတ်ပုံများကို ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Hadware အဆင့် ရှေ့ကြည်နောက်ဝါး လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး လူများစွာပါဝင်သော ဗီဒီယိုအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
အလင်းရောင် မှိန်သည့်နေရာမှာပင် ရှင်းလင်းပြတ်သား လှပသော အလှရိုက် ဓါတ်ပုံများ ရရှိနိုင်စေရန် AI နည်းပညာ အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ၏ အလှအပဆိုင်ရာ စံညွှန်းအတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ ပုံဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။
သင့်ဖုန်းနှင့်ပင် 108MP ရှိ ပညာရှင်အဆင့်ပုံရိပ်များကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
Ultra Steady Video, အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဘလော့တင်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
ရှေ့ကင်မရာဖြင့် တည်ငြိမ်သည့် ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးနိုင်ရုံမျှမက နောက်ကင်မရာဖြင့်လည်း အထူးတည်ငြိမ်သည့် ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ Selfie ဓါတ်ပုံများမှစ၍ မြင်ကွင်းဓါတ်ပုံများအထိ သင့်စိတ်တိုင်းကျ ဘလော့တင်နိုင်စေရန် ချောမွေ့ပြေပြစ်ကောင်းမွန်သော ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါသည်။
30W VOOC Flash Charge 4.0, ၅ မိနစ်အားသွင်း ၄ နာရီဖုန်းပြော
OPPO ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည့် VOOC အားအမြန်သွင်းစနစ်သည် ပုံမှန်ရှေးရိုးအမြန်အားသွင်းစနစ်များကို ကျော်လွန်၍ အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် အလျှင်အမြန်အားပြည့်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြီးမားသော ဘက်ထရီဖြစ်သည့် 4000mAh ထက်ပိုမိုသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
1.9 နာရီ Instagram သုံးနိုင်ခြင်း
1.7 နာရီ YouTube သုံးနိုင်ခြင်း
AI နည်းပညာသုံး ညဘက်ဖုန်းအားသွင်းခြင်း
သင့်ဖုန်းကို ညလုံးပေါက်အားဖြည့်သွင်းရာတွင် AI မှ သတ်မှတ်ပေးသော မနက်နိုးထချိန်တွင်မှ ဘက်ထရီကို ၁၀၀% အားပြည့်အောင် ချိန်ညှိဒီဇိုင်းထွင်ပေးထားပါသည်။
Apps6ခုဖြင့် စစ်စီဝေဖန်၍ ဘက်ထရီကုန်ခြင်း သက်သာအောင်ပြုလုပ်သော နည်းစနစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။
70 မိနစ် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း
49 မိနစ် စာတိုပို့နိုင်ခြင်း
35 မိနစ် Grab သုံးနိုင်ခြင်း
30 မိနစ် Google Map အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
MediaTek Helio P95 with 8GB+128GB, အဆင့်မြှင့်ထားသော ချပ်စ် ၊ ပိုမိုမြန်သော လုပ်ဆောင်မှု
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဂိမ်းကစားခြင်းများအတွက် MediaTek HyperEngine
အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ဟိုက်ပါအင်ဂျင်နည်းပညာသည် ဉာဏ်ရည်ကွန်ယက်စနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည့်အတွက် ဖုန်းအား ထိတို့စေခိုင်းခြင်းကို အမြန်အဆန် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် တောက်ပရွန်းစိုသော အရောင်အသွေးအမြင်ကို ရရှိစေနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး အထူးအားဖြင့် အလွန်လေးသည့် ဂိမ်းများကစားချိန်တွင်ပင် လျှင်မြန်ချောမွေ့သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ColorOS 7.2, ချောမွေ့ပြေပြစ်မှုနှင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းခြင်း
ပေါ့ပါးလှပ ရင်သက်ရှုမောဖွယ်ကောင်းအောင် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားပြီး အလိုလိုသိမြင် တွက်ဆပေးနိုင်သော လုပ်ငန်းထိတွေ့လုပ်ဆောင်မှု အစိတ်အပိုင်း interface များပါဝင်ကာ စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
ColorOS 7.2 အကြောင်း အသေးစိတ်လေ့လာမည်
လက်ဂ် မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ထိန်းညှိပေးထားခြင်း ပိုမိုချောမွေ့မြန်ဆန်သော လုပ်ဆောင်မှုများ
မမ်မိုရီကြောင့် ဖြစ်နိုင်သော အမှားများကို ထောက်လှမ်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ထိုအမှားများ တုံ့ဆိုင်းသွားအောင် သို့မဟုတ် ငြိမ်သက်လျော့နည်းသွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
အလိုအလျောက် ဒေတာဘေ့စ်များအား ချိန်ညှိပေးခြင်း
Air Gestures, ဖုန်းဖြေဆိုနိုင်ခြင်း
ဖုန်းဖြေဆိုရန်အတွက် ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ထိရန်မလိုဘဲ လေဖြင့်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်စေခိုင်း၍ ဖုန်းနှင့်အကွာအဝေး ၂၀ - ၅၀ စင်တီမီတာ အတွင်းတွင် ဖုန်းပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းကို အပေါ်သို့မြှင့်တင် လိုက်ရုံဖြင့် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1. ပြသထားသည့် လက်ဗွေစနစ်ဖြင့် လျှင်မြန်စွာ ဖုန်းလော့ခ်ဖွင့်ခြင်း စမ်းသပ်ချက်ကို OPPO မှ ရုံးတွင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ကို အမှောင်ထားစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ဗွေဖတ်သည့်နေရာမှ မီးလင်းမည်ဖြစ်သည်။
2. 48MP ပင်မကင်မရာသည် 12MP ပုံရိပ်ထွက်အောင် ပုံသေပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ 48MP ရရှိနိုင်အောင် setting တွင် သွားရောက် ချိန်ညှိပေးရမည်ဖြစ်သည်။
3. Ultra Clear Mode ရရှိအောင် ဆော့ဝဲလ်ဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး ပစ်ဇယ်မှာ 108MP ဖြစ်သည်။
4. 30W VOOC Flash Charge 4.0 ကို OPPO စမ်းသပ်ခန်းအတွင်း အဆက်မပြတ် အသုံးပြုသော အခြေအနေတွင် စမ်းသပ်ထားခြင်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် အားသွင်းနိုင်သည့် အချိန်သည် လက်တွေ့အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
5. ဘက်ထရီတန်ဖိုးသည် သာမာန်အားဖြင့် 4015mAh ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး တန်ဖိုးမှာ 3920mAh ဖြစ်သည်။
6. Super Power Saving Mode ၏ အသင့် standby ရှိနိုင်သော အချိန်သည် သတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားသော အက်ပလီကေးရှင်း ၆ ခုကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး Super Power Saving Mode ကို ဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ အခြားမရွေးချယ်ထားသော အက်ပလီကေးရှင်း (သို့မဟုတ်/ နှင့်) Super Power Saving Mode ဖွင့်ထားသော အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုခြင်းစီ၏ standby time ကို ခန့်မှန်းအဖြစ်သာ ယူဆရမည်။
7. လက်ဂ်ဖြစ်သည့် ယေဘုယျအခြေအနေကို တွက်ချက်ရာတွင် မျိုးဆက်၏ နောက်ဆုံးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သော F15 ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ မမ်မိုရီကို Defragmentation ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဒေတာဘေ့စ်ကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်း စသည်ကို တွက်ချက်ရာတွင် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မျှ မရှိသောအခြေအနေ၌ စမ်းသပ်ခန်းအတွင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
8. ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည် အကြောင်းရင်းတချို့ပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှန်တကယ် ထွက်ရှိချိန်မှသာ ကိုးကားမှုပြုပါရန်။
9. အချို့ထုတ်ကုန်များ၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည် တင်သွင်းသူအပြောင်းအလဲကြောင့် အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှုများရှိနိုင်ပါသည်။
10. OPPO မှ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်းတာမှုများနှင့် စစ်ဆေးသည့် အချက်အလက်များ စသည့် အချက်အလက်အားလုံးသည် စမ်းသပ်ခန်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူထံမှ ပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ထိုအချက်အလက်များသည် ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်း၊ စမ်းသပ်သည့် အခြေအနေနှင့် ကုန်ပစ္စည်း၏ ဗားရှင်းပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိပါသည်။